Igumbi lesi-2-Imbonakalo yegadi, e-Singleton 猎人谷 - I-Airbnb
Igumbi lesi-2-Imbonakalo yegadi, e-Singleton 猎人谷
Indlu ibekwe kwindawo ezolileyo ye-acreage, kwiHambledon Hill, eSingleton. Yimizuzu emi-5 ukuya kwi-Singleton CBD, kufutshane nazo zonke izinto eziluncedo, engqongwe yimithi kunye nezitiya, phumla kwaye wonwabele ubomi beentaka kunye notyelelo ngamanye amaxesha oluvela kwii-wallabies zethu ezinobuhlobo kunye neekhangaru.
Siyakumema ukuba uhlale endlwini yethu. Silusapho lwamazwe ngamazwe, nokuba usuka phi na, wamkelekile ekhayeni lam!
Eli gumbi liGumbi lesi-2, ezantsi, linebhedi elingana nenkosi kunye newodrophu eyakhelweyo. Kwaye inomnyango wabucala.
(Igumbi loku-1 linebhedi enkulu yenkosi kunye neebhedi ezimbini zomntu omnye ezinegumbi lokuhlambela labucala. Igumbi lesi-3 linebhedi eyi-queen kunye nebhedi enye enewodrophu eyakhelweyo. Igumbi lesi-4 linebhedi eyi-queen - edweliswe ngokwahlukeneyo kwi-airbnb.)
Nje 5 imizuzu ukusuka Singleton CBD, 25 imizuzu ukusuka izidiliya best zehlabathi e Hunter Valley, 50 imizuzu ukusuka Airport Newcastle, 60 imizuzu ukusuka Newcastle beach. Kwaye iSydney yi-2.5 iiyure zokuhamba.
Jonga idolophu entle kunye neHunter River kufutshane nekhaya, okanye uhambe ngebhayisekile ecaleni kweefama ezimangalisayo ezikufutshane.
Ukuba ungumntu othanda i-skydive, iSkydive Elderslie-iNewcastle Sport Parachute Club ikwimizuzu engama-25 kuphela. IiFlights zeHot Air Balloon kunye neHunter Valley Horse zimalunga neekhilomitha ezingama-30.
Sizama ukwamkela zonke iindwendwe zethu ekufikeni kwazo. Nangona kunjalo, xa oku kungenzeki ekufikeni kondwendwe lwethu, siya kungena kunye neendwendwe zethu kwinqanaba elithile ngexesha lokuhlala kwazo ukuze siqiniseke ukuba bonwabile.